Akusiyo imfihlo ukuthi abavakashi abaningi ukuya kwamanye amazwe, hhayi kuphela ukuze uphumule futhi ubone izinto, kodwa futhi ukuba kahle otovaritsya. Ungakwazi uhlu emazweni amaningana, kuhlanganise nabathandekayo European, okuyizinto uhamba abanolwazi abakhethiwe ngenxa yezitolo.
Ngokwesibonelo, abanye abantu bakhetha ukuthenga e-Austria, ngokuvamile lapho ukuthengisa umklami izingubo ngamanani akhokhelekayo. Vienna libhekene khona bethenga izindawo omkhulu ukuthi lendawo evamile lahlukaniswa izinhlobo: emgwaqweni eside elaligcwele nswi izitolo kanye omkhulu eziyinxanxathela futhi ezitolo ezinkulu.
Izici Vienna Outlet
izingubo Exclusive nomklami kusuka brand owaziwa ingatholakala yezitolo of Vienna, ogama lakhe - "Parndorf". Outlet ingekho emzini, futhi kancane okunye. I up eya kuthatha esiphezulu imizuzu amane. Njengoba umkhuba ubonisa, imali esetshenziselwe ukukhokhela uhambo futhi abe isidlo, ukukhahlela ngokuthenga kuqala.
Njengoba sekuphawuliwe kakade, shopaholics eziningi, "Parndorf" - kundawo lapho ungakwazi ukuthenga izinto ezifanayo njengoba kule boutiques central e Vienna, kodwa ishibhile. Lapho zezitolo agcwele ezihlukahlukene ezitolo, ukukhiqizwa engesiyo eliphansi in izinga kuya ukuthi predlagetsya amaphuzu untwisted, naphezu kwezindleko nomsebenzi ongaphakeme.
Ukuvula izikhathi Outlet Centre: kusukela 9:30 kuya 19:00 izinsuku ezine (Msombuluko kuya ngoLwesine), kusuka 9:30 kuya 21:00 ngoLwesihlanu futhi kusukela 9:30 kuya ku 18:00 ngoMgqibelo. NgeSonto kuba usuku off, futhi ivaliwe ngamaholidi.
Ngaphambi kohambo oluya yezitolo kufanele kube ukuthola lapho itholakala "Parndorf" (esidayisa). Uyithola kanjani lapha uyazi yanoma yimuphi isakhamuzi sendawo, njengoba yezitolo we edolobheni ethokomele of the gama elifanayo. Kuyinto Awukude dolobha Austria - km 40 kuphela. Igama eligcwele mall Austria - Umklami Outlet Parndorf.
Kusukela Vienna ukuba ngifike kuleyo ndawo esidayisa kungaba shatlovom ebhasini - ziya isakhiwo we-Opera Vienna State izinsuku ezimbili ngesonto - ngoMgqibelo nangoLwesihlanu - njalo ngehora. Imali imayelana eziyishumi-euro (zohambo) abadala kanye euro ezine izingane. Amathikithi kumele ithengwe on the spot, okungukuthi, ngqo edolobheni, futhi ziyozama kubo endleleni emuva Vienna. Qiniseka ukuba banake ukuthi kwenzekani emuva eziningana impela abagibeli. Ngakho-ke, kumelwe amathikithi angathengwa kusengaphambili, okungenani ibe ihora elilodwa ngaphambi kokuhamba.
Uma ungazange uphathe ngiyogibela ibhasi, ungabiza itekisi. Mini-bass kufika abantu abambalwa kuzothatha isitimela / sesitimela Parndorf euro ezimbili. Futhi ngamunye itekisi yokugibela izobiza ngaphezulu - mayelana eziyisikhombisa euro. Kusukela esiteshini ungathola eVienna ezitimeleni ezihlukahlukene, ikakhulukazi ngesikhathi lesifunda isitimela express (nje imizuzu 40). Futhi uzinake ukuthi lokhu yezitolo akuyona kude Budapest. "Parndorf" - uphuma khona, okuyinto liye laba yindawo ozithandayo bethenga, hhayi kuphela abakhileyo emadolobheni amancane aseduze, kodwa futhi izivakashi ezivela kwamanye amazwe.
Outlet e-Austria ( "Parndorf") uqhosha brand eziningi emelelwa - ingqikithi ezingaphezu kuka 150. Ngakho-ke, abathengi lapha ungathola iqoqo izingubo, izicathulo kanye izesekeli kusukela Prada, nguyenhanh, Active Camel, Pierre Cardin, Adidas, Escada, le Benetton, ka Armani , Burton, Inkundla yezindiza, Bench, Polo Ralph Lauren, Billabong nezinye emhlabeni brand eziningi abadumile. Fans of ukuyothenga izinkambo ngokuthi kule ndawo ipharadesi shopaholics, njengoba emashalofini ungathola umklami izingubo ngamanani ezingabizi, futhi Ukukhetha kwabo imiqulu. Nakhu kufika imikhaya nezingane, njengoba kukhona umkhiqizo kokubili abadala kanye izingane nentsha.
Zonke izaphulelo kungenzeka amaqembu ahlukene kwezimpahla ethulwa kwi website esemthethweni mall "Parndorf". Outlet, kanye njalo yezitolo ezinkulu, uyinsiza yakho inthanethi kumakhasimende waba nalo yini ithuba ukubona zokukhiqiza intengo kuphi emhlabeni.
Isayithi posted izikhangiso mayelana yokuthengisa oluzayo. Ngokwesibonelo, izaphulelo umxhwele ayatholakala ngamaholide kaKhisimusi. Kodwa ukuthengwa engcono ungenza amaholidi kaKhisimusi. Ngalesi sikhathi, isaphulelo evamile 30%, bese kuthi lawa amanye Izipesheli. Ngenxa yalokho, kukhona ithuba ukuthenga into kwekhwalithi lemali ngempela yeningi okuyinto engaphansi 70% kunanoma izindleko zokuqala.
Ngokuvamile, izaphulelo enkulu zenziwa kwi izingubo nezicathulo eyayisezweni vogue kule sizini zokugcina futhi nakakhulu ngonyaka odlule. Lokhu umklami izingubo, kanye nezingubo zabesifazane, amasudi zabesilisa, kanye izikhwama, amawashi, amabhande kanye nezinye izinsimbi.
Ukuze lezi zifiki kungukuthi elahlekile phezu ezinkulu okudayisa isikhala phakathi nendawo "Parndorf" esidayisa inikeza ukusebenzisa amasevisi ezintathu Auto Isiqondiso. Enye into emnandi wukuthi ithuba abashayeli ukupaka mahhala ngesikhathi yokupaka elula.
Ukuheha abathengi ngaphezulu endaweni likwazi ukufinyelela ukukhulula-Wi-Fi, kanye ATM eziningi, ezikhumulweni, isitoreji izinto. Kuyinto elula ukuthatha izingane ezingaphansi kweminyaka engu-iminyaka emithathu, okungaba isikhathi eside ukushiya kuya ochwepheshe isikhungo sezingane omkhulu sika.
Uma abathengi ziye zakhomba usuku lonke yezitolo, khona-ke kulula ukuthola indawo lapho nawe ungadla evamile. Ensimini ka isikhungo esidayisa mayelana zokudlela eziyishumi nezindawo zokudlela ezinhle. Futhi, ningadakwa ukushintshana inkinga, ngoba amabhange ukusebenza lapha.
Izinzuzo yezitolo European
Ukuthenga eYurophu izivakashi Russian ukuthi kukhona ithuba ukukhipha Tax Mahhala esikhumulweni sezindiza bese ubuyela ingxenye yemali esetshenziselwa ukuthengwa. ukubuyiselwa elilinganiselwe mayelana 12 euro angu engamakhulu ngamunye kwesokunxele ezitolo.
Futhi esidayisa 'Parndorf' eVienna inama abasebenzi friendly futhi sibe nomusa okungukuthi ngokushesha ngaso sonke isikhathi futhi ukweluleka ekutholeni izinto ezilungile. Zonke izimpahla zibekwe emashalofini ngombala kanye namafemu esikhiqiza, okuyinto lula isipiliyoni yezitolo.
Outlet "Parndorf", ukubuyekezwa zazo kulula ukuthola emakhasini Imininingwane imithombo izihloko ezihlobene sasivame ukuxoxa amakhasimende ezithangamini ezehlukene futhi ukuxhumana nomphakathi. Abantu ukwabelana nakho komuntu siqu, futhi ubhale amaposi efana bezwe kwethu shopaholics angaphandle. Ngokusho izivakashi zalo Outlet, lapha wonke umuntu angathola lokho akufunayo. Inani elikhulu lemikhiqizo ukuze ukhethe imodeli ezifanele izingubo nezicathulo kuze anyone fana Mod olukhuni kakhulu.
izivakashi abaningi bayayithanda indlela yokuthi zonke lezi brand eyodwa (endleleni, limnandi) indawo, futhi akudingeki ukuba ugijime, funa izitolo emigwaqweni. Pavilions ahlotshiswe ngemibala egqamile kakhulu, okuyinto futhi oziphakamisa kwemizwelo. Okungukuthi, zonke izimo ziye wadala ukuze uthole ngivela esitolo ubumnandi nje. Nakuba abanye Ongoti kweqiniso yemfashini, ngubani ephethwe ukuqhathanisa eziyinxanxathela e-Austria nakwamanye amazwe, wayemthanda namanje boutiques Italy.
Ngokungafani nezinye izindawo
Njengoba izivakashi, shopaholics, esidayisa 'Parndorf' (ikheli: Umklami-Outlet-Strasse 1, 7111, Parndorf), kukora abathengi esingaphansi isikhungo esifanayo e-Milan. Ngakho ngokuvamile emashalofini ebukhoneni lonke uhla osayizi onobuhle eziningi.
Ngaphezu kwalokho, ngenxa yelungiselelo okulula izitolo kanye ibalazwe, kuba lula ukuyisebenzisa. Ngokusho kohlelo, isigodi uphuma khona, kukhona amayunithi eziningana ngesimo zeJiyomethri, ngalinye elikwazi unesibopho ukuba silandele isitayela esithile. Ngokwesibonelo, e-"ibhokisi elikhulu," badayise izingubo okunethezeka yokuhlala ebhkisini esingunxantathu - ukuxuba lemikhiqizo ezahlukene kanye amamaki, futhi isikwele ezincane - izinto zakudala kanye nemidlalo.
Kukhona lapha i yokupaka yangaphakathi ukuthi kwenza kube lula ezihlobene ne izikhwama emotweni. Futhi kokuba ukufinyelela internet mahhala kunciphisa isikhathi sokulinda. Ngokwesibonelo, akubona bonke abantu abathanda yezitolo, abanye abantu bakhetha ukulinda izintokazi zabo ehlezi emotweni. Futhi uma kukhona i-Internet, isikhathi siyobonakala sishesha.
Nokho, ukufana olugqamile yezakhiwo esidayisa emzaneni nabanye European eziyinxanxathela efanayo. Futhi zipendwe ngemibala egqamile futhi abe efanayo design zezitolo. Lokhu kungenxa kakhulu omunye storey emadokodweni ezitolo.